Home टिप्स स्वस्थ रहन उपवास
सामान्य शब्दमा उपवासको अर्थ खाद्य वा पेय पद्वार्थबाट बिमुख हुनु हो । संस्कृतमा उपधातुको अर्थ ‘निकट’ र वासको अर्थ ‘रहनको लागि’ । अर्थात उपवासको मतलब ईश्वरको नजिक रहनु वा ईश्वरसँग घनिष्ठ हुनु हो । अर्थात भोजनबाट टाढा हुनु हो ।
उपवासको अलग–अलग तरिका हुन्छन् । जल उपवास, रस उपवास, अस्थायी उपवास, आंशिक उपवास । एकथरी उपवासमा केही घन्टादेखि केही दिनसम्म खाद्य र पेय पद्वार्थबाट टाढा रहनु पर्छ । जल उपवासमा एक निश्चित समयको लागि पानी तथा रस उपवासमा निश्चित समयपछि तरकारी वा फलका रस खाने गरिन्छ ।
महाभारतमा ‘व्रत’ धार्मिक संकल्पको रुपमा आएको छ । जसमा मानिसको सामान्य व्यवहार र अन्न सम्बन्धि केही नियमको पालना गनूृपर्छ । पुराणमा व्रत भंग हुनेको दोष र उनको प्रायश्चितको बारेमा पनि वर्णन गरिएको छ । मनुस्मृतिमा अधिक भोजन र यसको दुष्परिणाम प्रति सचेत हुन निर्देश दिएको छ । भोजन सही अनुपात र समयमा मात्र गर्नुपर्छ ।
उपवास बस्नुको फाइदा
उपवास बस्नाले केवल शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता मात्रै बढाउँने होइन्, तौल घटाउने देखि शरीर र मनलाई स्वस्थ राख्न पनि अहम भुमिका निभाउँछ । मधुमेह रोगीका गरिएको अध्ययनको अनुसार उपवासले शरीरमा चीनीको मात्रा कम गर्न सक्छ । उपवासले इन्सुलिन प्रतिरोधको कम गर्न तथा क्यालोरी सेवनलाई कम गर्ने तरिकालाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।
यसको साथै उपवासले शरीरमा सामान्य प्रतिरक्षा प्रक्रियालाई बलियो बनाएर कुनै पनि संक्रमणसँग लड्नमा मद्दत गर्छ । यसले जीवाणु तथा विषाणुबाट बचाउँछ, तर पुरानो वा दिर्घ रोगीको लागि गम्भीर समस्या निम्तन सक्छ । अर्को एक अध्ययन अनुसार, हृदय रोग, क्यान्सर, गठिया सम्बन्धि रोगहरुमा पनि सुन्निने समस्यालाई उपवासले कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । उपवासले रक्तचाप, ट्राइग्लिसराइड्स तथा कोलस्ट्रोललाई पनि सुधार ल्याउछ । आहार र जीवनशैलीमा परिर्वतन गरेर हृदय रोगको खतराबाट पनि बचाउँन लाभकारी हुन्छ । विशेष गरी उपवासले रक्तचाप घटाउन र तौल नियन्त्रण गर्नमा ठुलो भुमिका खेलेको हुन्छ ।
मुसामा गरिएको एक परिक्षणमा उपवासले मस्तिष्क स्वास्थ्यलाई रक्षा गर्नलाई सक्षम हुने पत्ता लागेको छ । उपवासले समय र ध्यानमा कमी तथा स्मृति वा सिक्ने क्षमतामा पनि सुधार गर्न सक्छ । उच्च प्रोटिनयुक्त आहारले हाम्रो स्मृति अवलोकनमा मधुरो बनाइदिन्छ र व्याकुलता तथा संवेदनशीलता बढाइदिन्छ । जति हामी लगातार रुपमा प्रकार–प्रकारका आहार लिन्छौ तब शरीरले ग्लाइकोजन कम गर्र्ने मौका पाउदैन । जसबाट केटोन उत्पादनको लागि समय मिल्दैन र त्यसको असर हामीले भोग्नु पर्छ ।
पुरै दिन उपवास बस्दा ९ प्रतिशतसम्म तौल कम गर्न सकिन्छ । मानव विकास हर्मोन एक प्रकारको प्रोटीन हर्मोन हो । जसले स्वास्थ्यको केही नराम्रा चीजलाई नियन्त्रित गर्छ । नियमित उपवासले ग्रोथ हर्मोनको स्राव बढाउँछ र शारीरिक विकास, पाचनतन्त्र, तौल घट्ने र मांसपेशी बलियो बनाउँछ । उपवासले व्यक्तिलाई दिर्घायु बनाउँछ र जवान बनाइराख्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
२४ घण्टामा ५७८ कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज
खबर वाइड संवाददाता - २०७७, १८ मंसिर बिहीबार १२:१५ 0
काठमाडौँ- पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५७८ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म २ लाख ५५...
नेपालमा हाल ५ हजार १३३ सक्रिय संक्रमित
काठमाडौँ– नेपालमा हाल कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ हजार १३३ रहेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिनेको तुलनामा निको हुनेको संख्या बढेसँगै...
मुटु कसरी स्वस्थ राख्ने ?
आज विश्व मुटु दिवस। संसारभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ। मुटु दिवसकै अवसरमा काठमाडौंमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिँदैछन् । आममानिसमा मुटुरोग भन्नासाथ हृदयघात र हार्ट...
नेपाल जब फेयर २०२१- माघ १ देखि सुरु हुँदै
अर्थतन्त्र खबर वाइड संवाददाता - २०७७, १८ मंसिर बिहीबार १२:१५ 0
मिति २०७७l०९l२७ रोजगारीको खोजीमा रहेका शिक्षित युवा र सक्षम जनशक्तिको खोजीमा रहेका रोजगारदाता कम्पनीबीच एउटै थलोमा अन्तक्र्रिया गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल जब फेयर २०२१ बिहीबारदेखि राजधानीमा...
नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मुल्यमा भारी गिरावट, कतिमा हुदैैँछ कारोबार ?
अर्थ खबर वाइड संवाददाता - २०७७, १८ मंसिर बिहीबार १२:१५ 0
काठमाडौं- नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मुल्यमा आइतबार भारी गिरावट आएको छ । शुक्रबार तोलाको ९५ हजार ३०० रुपैंया रहेको सुनको मुल्यमा साताको पहिलो दिन भारी गिरावट...
प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागि गएनन् सुदूपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रतिनिधि
समाचार खबर वाइड संवाददाता - २०७७, १८ मंसिर बिहीबार १२:१५ 0
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वागतका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित सरकार कुनै प्रतिनिधि विमानस्थल पुगेका छैनन्। नेकपा ओली समूहले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न...
धनगढीमा बाक्लो हुस्सु लागेपछि प्रधानमन्त्री ओली आइपुग्ने समय प्रभावित
कैलाली : प्रतिकुल मौसमका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको धनगढी आउने समय प्रभावित भएको छ। शुक्रवार बिहान ८:१५ बजे काठमाडौँबाट श्री एयरलाइन्स मार्फत धनगढी...